राजधानी बनाउन वन विनास किन ? « प्रशासन
राजधानी बनाउन वन विनास किन ?
प्रकाशित मिति :3October, 2018 5:30 pm
लामो समय केन्द्रीकृत राज्यसत्ताको निर्णयबाट जल्दै आएको सुदूरपश्चिम यतिबेला विकेन्द्रीकृतको निर्णयबाटै जल्न थालेको छ । हिजो काठमाडौंको सिंहदरवारबाट हुने गरेका निर्णयमा पहुँच पुग्न नसकेरै असन्तुष्ट सुदूरपश्चिम आज गाउँकै सिंहदरबारबाट समेत सन्तुष्ट हुन सकेको छैन ।
डोटीमा राजधानी हुनपर्ने मागसहित महिनौं आन्दोलित स्थानीयको जोडबल नपुगेपछि धनगढीलाई नै अस्थायी राजधानी तोकियो । तर, शुक्रबार प्रदेशसभाको दुई तिहाई बहुमतले कैलालीको तेघरी सामुदायिक वन क्षेत्रमा राजधानी बनाउने निर्णय ग¥यो । यो निर्णयले धनगढी र डोटीवासी असन्तुष्ट बने । धनगढीवासीले त केही दिन आन्दोलनसमेत गरे ।
तर, त्यति मात्रै होइन, प्रकृतिप्रेमी पनि यो निर्णयबाट सन्तुष्ठ छैनन् । आखिर किन वन क्षेत्र मासेर राजधानी बनाउनुपर्ने अवस्था आयो ? प्रकृतिप्रेमीको प्रश्न हो यो ।
‘हरियो वन, नेपालको धन’ अहिले एकादेशको कहानी जस्तै भइसक्दा बचेखुचेका बुट्यानहरूलाई समेत निमिट्यान्न पारेर क्रंक्रिटको सहर बनाउने होडमा छौं हामी । प्राकृतिक सम्पदामाथिको दोहनको असर विश्वव्यापी छ । सामान्य सतर्कता अपनाउन नसक्दा पहिरोले घर भत्काएका कतिपय उदाहरण छन् । तर, यसको हेक्का नराखी सयौं पहिरोमुनि राजधानी बनाउने निर्णय गर्न सांसदहरू किन अग्रसर भए ?
यता राज्यले चुरे संरक्षणको अभियान चलाइरहँदा उता चुरे फेदीमै बिना कुनै अध्ययन राजधानी बनाउने निर्णयले पुग्न जाने दीर्घकालीन असरमा नजर अन्दाज गर्न मिल्छ ?
चुरे क्षेत्रको एक किलोमिटरसम्म ढुंगा, बालुवासमेत संकलन गर्न नपाइने कानुन बनाउने अनि यता फेदीमै क्रंक्रिटको सहर बसाउने भन्ने ? त्यसै पनि वन विनासको दोहनको शृंखला नरोकिएको कैलालीमा वन, वन्यजन्तु, जैविक विविधता तथा वातावरणीय हिसावले पनि तेघरीमा राजधानी उपयुक्त हुन सक्दैन । बरु त्यही आसपास खुला ठाउँमा राजधानी बनाउन सकिन्छ ।
राजधानीका लागि अरु पनि कैयन विकल्प हुँदाहुँदै वनस्पति तथा वन्यजन्तुको बाँच्न पाउने अधिकार मिच्दै जैविक मार्ग मिचेर क्रंक्रिटको सहर बसाउनु युक्ति संगत त होइन नै ‘विनासकाले विपरित बुद्धि’ भनेजस्तै हो ।
वातावरण विनास गरी बनाएको अथवा वातावरणमैत्री नभएको सहर विकास होइन, विनासको द्योतक हो । ढिलो चाँडो यसले असर पुर्याउँछ नै । मुलुक निर्माणको अभिभारा बोकेका जनप्रतिनिधिले ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ गर्नु राम्रो होइन । राजनीतिक इबी र नागरिकसँगको प्रतिशोध प्रकृतिमाथि खन्याउनु बुद्धिमानी होइन । त्यसकारण यो निर्णयबारे एक पटक सोच ।
Tags : प्रदेश नं. ७ राजधानी
12 June, 2021 3:30 pm
काठमाडौँ । गृहमन्त्री खगराज अधिकारीले समाज र नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिने
11 June, 2021 7:22 pm
साबिक जिविसमा रोक्का राखिएका सबै खाताहरू फुकुवा
काठमाडौँ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले साविक जिल्ला विकास समितिमा रहेको
11 June, 2021 4:21 pm
नेपाल वायुसेवा निगमका अध्यक्षले दिए राजीनामा
काठमाडौँ । नेपाल वायुसेवा निगमका अध्यक्ष सुशील घिमिरेले राजीनामा दिएका
11 June, 2021 1:06 pm
काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले कोभिड-१९ का कारण प्रभावित भएको मुलुकको